काँग्रेस संकटमा पर्दा देउवाले के राजीनामा देलान् ? यस्तो छ - Muldhar Post
काँग्रेस संकटमा पर्दा देउवाले के राजीनामा देलान् ? यस्तो छ
अरुण बराल २०७४, २२ मंसिर शुक्रबार 352 पटक हेरिएको
काठमाडौं उपत्यकादेखि लिएर तराई–मधेसको अवस्था हेदा त्यहाँ पनि कांग्रेसको स्थिति दयनीय छ
र, काठमाडौं उपत्यकादेखि लिएर तराई–मधेसको अवस्था हेदा त्यहाँ पनि कांग्रेसको स्थिति दयनीय छ । धनुषामा विमलेन्द्र निधिको क्षेत्रमा होस् या बिराटनगरमा सुरक्षित भनिएको डा. शेखर कोइरालाको क्षेत्रमा नै किन नहोस्, कांग्रेसले अग्रता लिन सकिरहेको छैन । मोरङमा वाम गठबन्धनले सबै सिटमा अग्रता लिनु कांग्रेसका लागि निकै ठूलो धक्का हो ।
राजधानीमा प्रकाशमान सिंहको क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा वाम गठबन्धनकै अग्रता देखिन्छ । ललितपुरमा पनि वाम गठबन्धनकै सुरुवाती अग्रता देखिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अब पार्टीको नेतृत्व आफैंले लिएर पाँच वर्षसम्म पार्टीलाई जनपक्षीय बनाउनेतिर लाग्छन् या कांग्रेसलाई झनै विद्रूप बनाउँदै लैजान्छन् ? यो हेर्न बाँकी छ ।
त्यो बेला देउवाले नैतिकताका आधारमा पार्टी सभापतिबाट राजीनामा दिन्छन् या दिँदैनन् ? त्यो अहिले नै बताउन सकिँदैन । विगतको नजिरलाई हेर्ने हो भने पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि एमालेका तत्कालीन प्रमुख माधवकुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी सभापतिबाट राजिनामा दिएनन् ।
त्यसैगरी दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिएनन् ।
अब बन्ने सम्भावित बहुमतको सरकारलाई समेत जनता र मिडियाले निरन्तर खबरदारी गरिराख्नुपर्नेछ । नभए यिनीहरु मैमत्त भएर बहुलाउन सक्छन् र हामीसँग बहुमत छँदैछ भनेर फेरि पुरानै ढर्रामा चल्न सक्नेछन् ।
कथंकाल वामपन्थीहरु सुध्रिए र पुण्य कमाउने बेलामा एकचोटि साधु बनौं न त भन्ने बाटोमा उनीहरु लागे भने यसले मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजान सक्छ । जनताले पनि यही आशाले वामपन्थीलाई भोट दिएका हुन् ।
वाम सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भने त्यो बेलामा कांग्रेसको शक्ति अझै खिइने र प्रजापरिषजस्तै हालतमा पुग्ने सम्भावना बढ्ने छ । त्योबेला छिमेकीले पनि शक्तिहीन कांग्रेसलाई उपियाँले जसरी सहजै छाडिदिन सक्छ । कांग्रेसलाई न जनताको साथ रहनेछ, न पराईको ।
जहाँसम्म कांग्रेस नेताहरुले वीपीको समाजवाद, लोकतन्त्र अनि कम्युनिष्ट अधिनायकवादबाट देशलाई जोगाउने बताउँदै आएका छन् । त्यसलाई जोगाउन कांग्रेसकै सदृश अनुहारको एमाले पार्टी उभिएपछि कांग्रेस नामको अर्को पार्टी किन चाहियो ? यस्तो प्रश्न उब्जन सक्छ लोकतन्त्रवादीहरुमा ।
यो कुरा विचारणीय छ कि नेपालका कुनै पनि नेता र दलहरु अन्तरस्करणबाटै नैतिकवान र जनपक्षीय छैनन्, यिनीहरुलाई जनदबावले मात्रै नैतिकवान र जनपक्षीय बनाइराख्न सकिन्छ ।
त्यसैले, अब बन्ने सम्भावित बहुमतको सरकारलाई समेत जनता र मिडियाले निरन्तर खबरदारी गरिराख्नुपर्नेछ । नभए यिनीहरु मैमत्त भएर बहुलाउन सक्छन् र हामीसँग बहुमत छँदैछ भनेर फेरि पुरानै ढर्रामा चल्न सक्नेछन् ।
हामीलाई चाहिएको स्थिर सरकार मात्रै होइन, जनपक्षीय एवं भ्रष्टाचाररहित स्थिर सरकार हो । यसका लागि एमाले र माओवादी भरपर्दो शक्ति होइनन् । जनताले यी दललाई शंकाको सुविधासहित बहुमत दिएका हुन् ।
वाम नेताले यो कुरा बुझ्न सकेनन् भने कांग्रेसले ५ वर्षपछि त्यसको लाभ उठाउन त सक्ला । तर, पुरानो कांग्रेसले होइन, सुधारिएको कांग्रेसले मात्रै ।
तथापि, देउवा नेतृत्वको कांग्रेस सुध्रिने सम्भावना अति नै क्षीण छ । अति नै ।
अरूण बराल अनलाइनखबर डटकमका सम्पादक हुन् । कानुनमा स्नातक एवं राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका बराल सन् २०१३ देखि अनलाइनखबरको सम्पादक छन् ।